Dhaqaatiir ka qeyb qaadanayay dibadbaxyada ka dhanka ah xukuumadda Sudan oo la xirxiray - BBC News Somali
Image caption Dibadbaxayaasha Suudaan
Midowga dhaqaatiirta Sudan ayaa sheegay in gaaska dadka ka ilmeysiiya iyo rasaas lagu furay gudaha isbitaal ku yaala halkaasi.
Midowga dhaqaatiirta oo marwalba dhaliiceeya dowladda Sudan ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo soo daayo in ka badan 12 dhaqaatiir ah kuwaasi oo lagu xirxiray intii ay socdeen howlgalo booliisku ka fuliyeen dalkaasi Sudan.
Diyaarad ku burburtay Suudaan oo ay saraakiil sar sare ku dhinteen
Xasarado dhaqaale ayaa sababay dibadbaxyo balaaran oo guud ahaan qabsaday dalka Sudan taasi oo loo arko halistii ugu weyneyd ee soo wajahda xukunka madaxweyne Cumar Al-Bashiir oo dalka soo maamulayay ku dhawaad 30 sano.
In ka badan 800 oo qof ayaa la xirxiray tan iyo bishii lasoo dhaafay kooxaha xuquuqul insaanka ayaana sheegaya in ugu yaraan 40 qof oo mudaaharaad sameynayay la toogtay.
Muddaharaadyo ka dhan ah dowladda Suudaan oo gilgilay Khartuum